ဘယ်သူ လူဆိုးလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဘယ်သူ လူဆိုးလဲ
Posted by Mg Ogga on Jul 3, 2010 in Drama, Essays.. |3comments
အင်း ကြည့်ရတာ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်လေးကို မှီငြမ်းထားတဲ့ပုံပြင်လေးလားမသိ။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျတော့လည်း ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ရင် မဆိုင်သလို နေရမယ်ဆိုတာ မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
ကြားသုံးကြားဝင်တလြူက အမိုက်ဆုံးဗျ….( ကားတွေကြား……. ခွေးတွေကြား……..ပု၇ွတ်ဆိတ်ကြား..)